Ngowe-1980, Shijiazhuang Pump Works babefake advanced technology pump oluludaka, nto leyo eye yaba isiseko-R & D Institute of pump oluludaka.
Ngo-1990, i-oluludaka omtsha iimpompo kwasasazeka technology lonke ilizwe kumashishini engundoqo, efana nokombiwa, yokunyibilikisa isinyithi, imichiza, amandla kunye emqoka.
Ngo-1996, i-zJ pump manqaku sele eziyilwe, eyayisetyenziselwa ukukhanya medium esirhabaxa yezityalo amandla kunye tailings zokuhamba.
Ngowe-1997, i-ZGB pump manqaku sele ziyilwe zaza ngenxa unikezelo oluludaka esirhabaxa kwisicelo phezulu intloko.
NgoMatshi 2006, efektri yethu yokuqala yasungulwa kwaye ezikhethekileyo zokumpompa izisombululo kwimarike yasekhaya, nto leyo enceda iiklayenti zethu ukufumana imiyalelo fast and professional kunye neenkonzo yesondlo.
Ngo March 2010, saqalisa ukuba ukungena kwimarike yamazwe ngamazwe, yaye kwisithuba seenyanga ezimbini, safika umyalelo yethu yokuqala ukusuka umxumi wethu eOstreliya.
Ukuqalela ngoNovemba, 2011, safika nentembelo ngakumbi nangakumbi kunye nenkxaso evela ingxelo kwimarike, nto leyo yanceda ukuba ukwakha isicwangciso esisiseko kwimarike yamazwe ngamazwe.
Ekupheleni kuka-2012, siye sayifumana lena inkxaso enkulu evela kurhulumente wengingqi, yaye eqinisekiswe kunye kwisiza ka 51.200 square metres.
Ekuqaleni 2013, saqalisa ukwakha mveliso wethu omtsha, nto leyo imi kummandla ipoma umzi Shijiazhuang.
NgoFebruwari 2013, iqela ngamazwe epheleleyo yokuqala inkonzo kwimarike yamazwe ngamazwe womhlaba, amaqela amabini ezahlukeneyo akabakhokela intengiso yobuchule kunye namava yokusebenza iminyaka emi-5 ngowama-mveliso pump oluludaka.
NgoDisemba 2014, siye bamenywe umxumi lethu USA ukwazi okungakumbi yokusebenza iimpompo zethu sayithi kunye nesicelo emarikeni.
Ngo-Agasti 2015, siye banikela iimveliso kunye neenkonzo zethu kumazwe angaphezu kwama-40 ezifana eRashiya, eUnited States, Australia, Italy, eJamani, eNetherlands, Turkey, Korea, Singapore, Malaysia, Iran njl ..
Ngowe-2016, siye exhibitied kwi MINExpo International eyayibanjelwe e Las Vegas, eUnited States, ukususela ngoSeptemba 26-28.
Ngowe-2018, siye exhibitied e Bauma, eyayibanjelwe e Shanghai, China, ukususela Nov. 27-30.
NgoJulayi 2019, iqela lethu iintengiso waya Kazakhstan, ukutyelela eziliqela abathengi zethu ezibalulekileyo, kwaye baya kuya PCVExpo oluya kubanjelwa e-Oct 22-24.
Kulo furture, siza kusebenza inkanuko ngakumbi ukukhonza abaxumi bethu ehlabathini lonke.